Kaontim-bola any amin’ny banky Arahi-maso ny mpanao politika sy olona ambony
Lalàna mifehy ny serasera Hodinihana eny Tsimbazaza amin`ny fivoriana manaraka
Nankatoavin'ny governemanta ireo antontan-kevitr'ireo fanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera taorian'ireo fakan-kevitra avy amin'ireo mpisehatra samihafa tamina haino aman-jery manerana ny faritra nataon'ny minisiteran'ny serasera sy ny kolontsaina.
Raharaha Helikoptera Mpanao gazety 2 voaheloka handoa10 tapitrisa Ar avy
Sazy henjana, dia fandoavana lamandy 10 tapitrisa ariary no nomen’ny Fitsarana an’i Nadia Raonimanalina talen’ny famoahan’ny gazety Le Quotidien sy Mahery Rabearivony gazetin’ny 24h Mada,
Filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara Notafihan’ny dahalo ny tanànany, very ny omby 50
Notafihan’ny andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana ny tanàna niavian’ny filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasika na ny SMM, Atoa Clément Jaona.
Arahin’ny fanjakana maso akaiky ny kaontin’ny mpanao politika sy ny mpiasam-panjakana ambony toy ny Tale jeneraly na “cadre” ambony amin’ny orinasa, izay sokajiana amin’ny hoe “client sensible” amin’izao fotoana izao.
Nananganana kaomisionina manokana mihitsy manara-maso sy manao tatitra amin’ny mpitondra momba ny vola miditra na mivoaka na ny “mouvement bancaire”, raha ny vaovao mivoaka. Midika io fa tsy misy intsony ny “secret bancaire” na ny tsiambaratelon’ny banky fa miboridana tanteraka amin’ny mpitondra ny zava-drehetra. Misy zavatra mampiahiahy matoa arahi-maso ny toe-bolan’ny olona iray, toy ny resaka famotsiam-bola azo tamina afera maloto. Tsy tokony hisy ny tahaka izany, raha tena voahaja ny lalàna, ary mandeha amin’ny mangarahara ny rehetra. Teren’ny lalàna hanao fanambaram-pananana ny mpitondra ambony, saingy tsy misy mangarahara sy tsy fantatry ny vahoaka madinika. Resahina foana fa ny ohatra dia miainga avy any ambony. Ny hafa anefa toa fehezina sy atao andrimaso tanteraka, fa ny mpitondra ambony toa afaka manao izay danin’ny kibony ihany. Misy fanazavana ve, ohatra, momba ny harenan’Atoa Andry Rajoelina nitombo be nanomboka ny 2009 ? Mahana ve ny fanjakana amin’ny resaka famatsiana ara-bola ny fanakorontanana na fanonganam-panjakana toy ny efa natao teto ka atao andrimaso ny rehetra ?